ह्यान्डक्राफ्ट बिक्रीका लागि किनेटरको गाइडले तपाइँलाई होभरक्राफ्ट चयन गर्न मद्दत पुर्याएको छ विश्वभरि सुरक्षा समाधानहरू
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट
घर संसाधन बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - खरीदारको मार्गदर्शक
out of this furnace essay format of resume for mba lecturer daniel blake homework thesis writing pattern viagra im vergleich buy essay here https://lynchburgartclub.org/master-thesis-in-psychology-example/ प्रविष्ट editorial essay thesis buy viagra kelowna custom paper writers घडी https://coveringthecorridor.com/rxonline/buy-female-cialis/43/ case study on competition act 2002 normal dosage for cialis sales uk viagra compare contrast essay examples http://v-nep.org/classroom/summary-essays/04/ http://jeromechamber.com/event/essay-grading-program/23/ thesis statement writer http://technology.swbts.edu/faculty/globalization-good-essay/18/ essay helper words साइट पछ्याउनुहोस् स्रोत साइट यहाँ क्लिक गर्नुहोस् स्रोत साइट oprahs resume checklist https://worldtop20.org/system/how-to-write-i-love-you-too-in-arabic/30/ साइट प्रविष्ट गर्नुहोस् clomiphene citrate buy com https://grad.cochise.edu/college/thesis-format-university-of-manchester/20/ क्लिक बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - यो होभरक्राफ्ट किनेरको मार्गदर्शकलाई डिजाइन गरिएको छ कि तपाइँले तपाइँको सानो वा मध्यम कर्तव्य होभरक्राफ्टलाई तपाईलाई तपाइँको व्यावसायिक वा मनोरञ्जन आवश्यकताहरू छनोट गर्न छनौट गर्न मद्दत गर्दछ। हॉवरक्राफ्ट खरिद गर्दा विचार गर्ने केही अंकहरू छन्। यो गाइड, "11 प्रश्नहरू तपाईले सोध्नु पर्छ कि एक होवरक्राफ्ट खरिद गर्दा भविष्यको मालिकहरूलाई सक्षम सार्थक निर्णयको आधारमा सक्षम बनाइनेछ र यो होभरकम्पको स्वामित्वमा हुने सम्भावना के राम्रो बुझ्न सक्षम छ।
अतीतमा सानो होभरकम्परी तीन श्रेणिहरु, रेसिंग शिल्प, किट-निर्माण, सामान्य प्रयोगमा वर्गीकृत गरिएको तथापि, अब व्यावसायिक चौथाईको चौथो श्रेणी हो।
1। रेस क्राफ्ट फोकसमा फोकस, त्यसैले हल्का हल्का हुन आवश्यक छ।
2। कम लागत र समझौता सुरक्षाको लागि प्रलोनमा स्व-निर्मित फोकस।
3। सामान्य प्रयोग शिल्प सुरक्षा र विश्वसनीयतामा फोकस, नमक पानीको प्रयोगमा काम गर्न सक्दछ।
4। व्यावसायिक ग्रेड, गुणस्तर, सुरक्षा, स्थायित्व, उछाल, आकार / प्वाइलोड र कुनै वातावरणमा काम गर्ने क्षमतामा अति फोकस।
अब तपाईंले विचार गर्नुपर्छ:
लागतको तुलनामा प्रदर्शन, सुरक्षा, विश्वसनीयता, स्थायित्व, उत्पादकता र लगानीमा फर्किनेछ।
हॉवरकम्प बिक्रीका लागि - तपाईं किन होभरान्टिक चाहनुहुन्छ?
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #1 - तपाई किन एक होभरकम्पटर चाहनुहुन्छ? पहिला तपाईं अस्पष्टता र विभिन्न इलाकामा यात्रा गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। तपाईं एक विमान कि बाढी भएको भूमि, चिसो, नदीबारी, उर्जा पानी / ज्वरो क्षेत्र, रैपिड्स, शिंगल समुद्र तट, खुला पानी, घास, रेत, रेगिस्तान, स्विम्पस, मार्शल्यान्ड, प्रेरिरी, गीलाल्याण्ड, माछा माछा, बोग, बेई घास, जमिलो बिरुवा, बर्फ, बर्फ, उज्यालो ताल, सूखे माछा, स्यान्डबैंक, सडक सूखाई, बगैचा जंगली जीवन वा पारिस्थितिकी बिना।
सानो हॉवरकम्पर्क धेरै कारणहरूको लागि लोकप्रिय हुँदैछ, र तपाईलाई आफैलाई सोध्नु आवश्यक छ किनकि तपाईलाई चाहानुहुन्छ। त्यहाँ रेसिंग, अफ-रोड, साहसिक, अन्वेषण, ट्रांसपोर्ट, टापु हप्पिंग वा 12-महिना मनोरञ्जनको लागि होभरक्राफ्ट हो। वा व्यापारिक प्रयोगको लागि, गोल्फ कोर्सहरूले तिनीहरूलाई क्षति पुर्याउन सबै वर्ष प्रयोग गर्न सक्छ। रिसोर्टहरूले तिनीहरूलाई सवारी आय, उत्साह, उपयोगिता कार्य, भ्रमण, भाडा र प्रचारको लागि प्रयोग गर्दछ। उनीहरू पनि भू-सर्वेक्षणकर्ता, पर्यावरणविद्, खोजी र उद्धार संघ, आगो सेनानियों द्वारा प्रयोग गरिन्छ। अन्वेषक, सरकारी एजेन्सी, एयरपोर्ट र तेल क्षेत्र कम्पनीहरू।
ठीक छ एकपटक तपाईंलाई थाहा छ तपाई के गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले निर्णय गर्नैपर्छ कि कुन शिल्पले तपाईका आवश्यकताहरु निर्मित मोडेल बनाउछन योजनाहरु वा किटहरु तपाई निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। हामी होभरकम्पलाई चार समूहमा रेसिंग, गृह निर्मित, मनोरञ्जन र व्यावसायिक शिल्पको वर्गीकरण गर्नेछौं। Racers फास्ट जाने को लागि बनाइन्छ, धेरै जोडा, धेरै सानो, पतली हल्लाहरू छन्, र धेरै सुरक्षा सुविधाहरु को कमी छ। गृह निर्माण किटले तपाईंलाई पैसा बचत गर्न सक्छ तर अक्सर निराशाजनक हुन्छ। इन्टरनेटमा छिटो चेक बिक्रीको लागि धेरै अर्ध-समाप्त परियोजनाहरू बन्द गर्दछ। मनोरञ्जन होभरकफ्ट मानक सुरक्षा, उपयोग को आसानी, प्रदर्शन र अन्य एटीवी जस्तै काम गर्न को लागि मजेदार हुन को लागी डिजाइन गरिएको छ।
व्यावसायिक होवरक्राफ्टले अधिक मनोरञ्जनत्मक मोडहरू जस्ता प्रदर्शन गर्ने सक्षम छन्, तर कामको कर्तव्यको लागि डिजाइन गरिएको छ, गुणस्तर, सुरक्षा, स्थायित्व, उत्थान, उत्पादकता, पेलोड र कुनै पनि वातावरणमा काम गर्न सक्षम छन्, र ठूलो आकारमा आउन। मूल्यहरू व्यापक रूपमा भिन्न हुन्छन्, विकल्पहरू र समग्र गुणस्तरको रूपमा। तपाईका बाँकी प्रश्नहरू मार्फत पढ्नु भएकोमा, ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं आफ्नो होभरक्राफ्ट प्रयोग गर्ने हो।
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - के तपाईंलाई एक इन्जिन वा दुई चाहिन्छ?
Hovercraft बिक्री को लागि - प्रश्न #2 - के तपाइँ एक इन्जिन वा दुई चाहिन्छ?
केहि निर्माताहरूले तपाईंलाई एक वा दुई इन्जिनको विकल्प दिन्छ, जबकि अन्य कम्पनीले मात्र एउटा डिजाइन छ।
धेरै होभरक्राफ्टले दुई इन्जिनहरू प्रयोग गर्दछ, एक बलका लागि, लिफ्टको लागि। लिफ्ट इन्जिनहरू प्राय: चालक-याकका सामने राखिएका छन्, ती सबै उकालो र शोर तपाईंमा आउछन्, र पहिलो लहर जसले तपाइँलाई हारेको इन्जिनलाई घुम्न सक्छ, लिफ्ट असफल भयो। दुई इन्जिनहरू पनि स्वरमा छन्, ड्राइभ गर्दा सानो फोकस चाहिन्छ, थप ग्याँस प्रयोग गर्नुहोस् र थप मर्मतको मतलब छ।
लिफ्ट इन्जिन अक्सर शिल्प को सामने मा छ। फन्ट-साइटेड इन्जिनले हॉवरक्राक नाकलाई भारी बनाउन सक्छ, र अधिक पछाडीमा (पानीमा अचानक रोकिएको छ, चाँडै यात्री यात्रुको कारण हुन सक्छ)। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं एक सुन्दर केटी / केटालाई देख्नुहुन्छ र विभाजित दोस्रोको लागि फोकस गुमाउनुहोस्; तपाईं ढिलो गर्नुहुन्छ ... OMG को बाहेक, तपाईं 50 किमी / घन्टा मा पानी मा जोर को बजाय लिफ्ट कटौती र घूमती कटौती। यदि तपाईं गलती देखि नाकावली गर्नुहुन्छ, अगाडी त्यो इन्जिन पानी संग बाढी, तपाईंको हवाई तकली बिना तपाईलाई छोड्न सक्छ। र यदि तपाईंले भूमिमा नमिल्ने हो - ओउ!
तथापि दुई अलग इन्जिनहरू, तपाईलाई स्थानमा घुमाउनुहुन्छ र सँधै अगाडी अगाडी बढि बिना स्थान बदल्नुहोस्। त्यसोभए, तपाईं लिफ्ट र जोडिको अलग-अलग नियन्त्रण चाहनुहुन्छ, वा तपाईं सञ्चालन गर्न केहि सजिलो चाहनुहुन्छ?
होभरक्राफ्टले सिफ्ट लिफ्ट गर्न र यसलाई अगाडी बढाउनुको लागी केवल एक इन्जिन चाहिन्छ। अधिकांश हॉवरक्राफ्टले लिफ्ट र जोरको लागि मात्र एउटा इन्जिन छ; यो नियन्त्रणको एक सेट प्रयोग गर्न सजिलो र टाढा छ सुरक्षित, एक इन्जिन सेवा गर्न सजिलो हुन्छ, साथै तपाइँ एक इन्जिनबाट कम शोर प्राप्त गर्दछ। Racers यो जस्तै ड्राइभरमा अधिक नियन्त्रण दिन को लागी बनाइन्छ, र एक इन्जिन विशुद्ध अधिकतम अधिकतम को लागि।
ईन्जिनको प्रकारको व्यावसायिक शिल्प प्रयोग अत्यधिक विश्वसनीय नयाँ इन्जिनहरू छन् जुन पूर्ण निर्माताको वारेन्टीसँग आपूर्ति गरिन्छ, धेरै वर्षले बर्फमोबाइल र माइक्रो्रोइट उद्योगहरूमा प्रयोग गर्दछ। अत्यधिक विश्वसनीय 2-स्ट्रोक र 4-स्ट्रोक इन्जिन सबै अनुप्रयोगहरू सजिलो उपलब्ध, मनोरञ्जन वा व्यापार। एक व्यावसायिक डिजाइन इन्जिन आवरण तत्वहरू तत्वहरूबाट उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान गर्दछ तर अझै छिटो र हटाउन सजिलो छ। सुसज्जित वायु सेन्टर रसेन्सरहरू र निकास मफलरहरूलाई कम से कम शोर राख्न। शिल्पको प्रयोगलाई विचार गर्नुहोस्।
ह्यान्डक्राफ्ट बिक्रीको लागि - के तपाईं एक फिसिगोल्फको छाला चाहनुहुन्छ?
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #3 - के तपाईं एक शीसे रेशा अनुहार चाहनुहुन्छ? सस्तो फाइबर ग्लास (जीआरपी) को मतलब पक्कै, चिन्ता, विच्छेदशाला, र अन्य समस्याहरूको होस्ट बाट महंगी मरम्मत छ। तपाईंको होभरक्राफ्टले धेरै वर्षहरू हुनुपर्दछ र यदि तपाईं यसलाई बेच्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाइँ पुनर्विक्रय मूल्यको रूपमा उच्च हुन चाहानुहुन्छ। केही कम्पनीहरूमा GRP उत्पादनको कलामा कुनै विशेष कुञ्जी छैन, र तिनीहरूको शिल्पलाई सम्भवतः छिटो र सस्तो रूपमा बनाउनुहोस्। अन्य कम्पनीहरूमा कुशल कारीगरहरू निर्माण र रोजगारको इतिहास छ जुन धेरै अनुभव छ। जब फाइबरग्लास नयाँ छ भने यो बताउन गाह्रो छ कि यो 20 वर्ष वा2महिनाहरू च्याईने, पछाडि वा लुगा लगाउनु अघि हुनेछ। त्यसोभए उनीहरु आफुले आफुलाई बिहे गरेकी थिइन।
चारैतिर इन्टरनेट च्याट रूमहरू हॉरकैंकको बोतमा पानीको द्रष्टको फोकसका शंकाहरू भरिएका हुन्छन् किनकि पानीको कारणले दरबारको माध्यमबाट जोगाइरहेको छ। यो जब हुन्छ धेरै मालिकहरू बेपत्ता हुन्छन् र रिसाउँछन्। एकल-छाला शीसे रेशा, विशेषगरी गैर-विशेषज्ञहरूले बनाइएका, सजिलै फटाउन सक्छन्। अचानक केहि सानो चट्टानमा पार्क गर्नुहोस् र तपाईंले एक दरार पाउनुभएको छ तपाईंले धेरै समय पछि ध्यान दिनुहुन्न। केही कम्पनीहरूले प्रबलित फाइबर ग्लास परतहरू प्रयोग गरेर थप कडा निर्माण प्रविधिहरू अपनाएर यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेको छ, र / वा प्रभावकारी प्लेटहरू, प्याचहरू पहिरन लगाउने र ल्यान्डिंग स्किडहरू थप्छन्।
यदि फाइबरसेल अब अझै राम्रो 10 वर्ष देख्नुहुन्छ भने, र ठीक तरिकाले निर्माणमा कति प्रयास गरियो र पहिलो स्थानमा एक नियन्त्रण वातावरणमा यो क्यान्सर। मोलेटको साथ ह्याक अन्ड्रेन्ड हुँदैन। जीआरपी जब नयाँ रूपमा सधैँ राम्रो देखिन्छ तर यदि नियन्त्रित वातावरणमा विशेषज्ञहरू द्वारा बनाइएन भने यसले चाँडै धेरै लुकेको समस्याबाट ग्रस्त हुनेछ। जीआरपी शिल्प मात्र पतली बनाइन्छ भने, यो सस्तो छ तर यो अर्थ हो कि होल बलियो छैन, यो सजिलै संग कम प्रभावहरु संग भोग्न सक्छ वा गल्ती ठाउँमा बस्न सक्दछ! जीआरपीको गुणस्तर जाँच गर्न पुरानो मोडेल देख्न सोध्नुहोस्, जुन6महिना पछि दरार र टुक्रा गर्न सक्छ।6महिना पछि, एक दिन मा एक बेमेल लगाउने शिल्प, धेरै फोहर लगाउन सक्छ। GRP मरम्मत महंगा हुन्छ। के शिल्पमा साँच्चै ठोस बम्पर सुरक्षा प्रणाली छ? के तपाईं प्रभाव क्षेत्रहरु लाई शिल्प को छेउमा र तल को तल को कडा या हथौड़ा संग कडा मेहनत वाला व्हाक्स दे सकते हो? के तपाईं बस्न सक्नु हुन्छ वा छेउमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ?
एक व्यावसायिक ग्रेड सबै इलाका वाहनों को मजबूत हुन को लागि आवश्यक हुनु पर्छ एचडीपीई (उच्च घनत्व पॉलीथाइल) र कार्बन फाइबर, Kevlar जस्तै सामाग्री देखि हुनु पर्छ। केही फाइबर यदि कुनै पनि फाइबरका बाहेक अरू कुनै पनि सामग्रीबाट बनाइन्छ भने, तथापि व्यावसायिक शिल्पले दरबार प्रतिरोधी र टिकाऊ गर्न आवश्यक छ। एचडीपीई (उच्च घनत्व पॉलीथाइल) र कार्बन फाइबरको स्थायित्व विशेषताहरू हेर्नुहोस्, बुलेट प्रूफ इफेस्टमा प्रयोग गरिन्छ। नमूना अनुरोध गर्नुहोस्।
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - के बारे मा उछाल को बारे मा?
हेलिकप्टर बिक्रीको लागि - होभरकम्प क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #4 - उत्साहको बारेमा के हो? रेसिङ होभरक्राफ्टको उद्देश्य धेरै उत्साहित छैन। अधिकांश हुन्, तर केहि निर्माताहरू वास्तवमै पानीमा रोक्न सल्लाह दिन्छन्। मनोरञ्जन मोडेल पानीमा पार्क गर्दा पूर्णतया उत्प्रेरक र स्थिर हुनुपर्छ, तपाईंलाई गोर्खामा केहि माछा मार्ने, एक राम्रो पुस्तक, वा भान्साको आनन्द उठाउने अनुमति दिन्छ। केही पानीमा बाढी वा झुन्ड्याउँदा पूर्णतया उत्प्रेरित हुन्छ। घर निर्माण निर्माण किट बढावाको साथ थाहा छैन जबसम्म तपाईं पहिलो पटक पानीमा रोक्न सक्नुहुन्छ।
होवरक्राफ्टले पनि "हम्प स्पीड" भनिने केहि चीज गरेको छ, यो समय "हम्प टिम" लिन्छ। यसको अर्थ तपाईं पानीमा बन्द भएपछि, कति लामो समयसम्म हवाई को कुशनमा फिर्ता लिने र फेरि पुनः सुरु गर्न लिन्छ? यो धेरै भिन्न हुन सक्छ, र सबै शिल्पमा अधिकतम वजन छ जसले सबैलाई हम्पमा पुग्न सक्षम हुनेछ। त्यसोभए, समुद्री-ग्रेड उछाल फोम र सामग्री प्रयोग गरिन्छ? कस्तो प्रकारको बाढी र स्थिरता परीक्षण यो पास पारिएको छ? हम्प गति र अधिकतम वजन के हो?
धेरै हॉवरक्राफ्टहरू खराब भोज गुणहरू छन् र वास्तवमा हिसाबले सिङ्क गर्न सक्दछन्, केही शिल्पले राम्रो उदारताबारे दाबी गर्छन् तर वास्तवमा एक नजर राख्दछन्, शिल्पको वजनको लागि उछालको भोल्युमको मात्रामा काम गर्न र पेलोड लिने काम गर्छ। अधिकांश शिल्पमा केवल फलाम को लागि पर्याप्त क्षेत्र भोल्युम छैन जसलाई शिल्पले मात्र यात्रुलाई पनि छोडिदिन्छ।
वाणिज्यिक शिल्प पूर्ण उछाल हुनु पर्छ, जस्तै कि प्वाललोड र ब्यालेन्स कार्यको भाग हो, ककपिटमा पानीको दबाइ बिना सूचीबद्ध वजन लिनु, पानीमा सजिलै सजिलै रोक्न सक्षम हुनुपर्छ। बाढी बढ्दो अनुमोदनको लागि व्यावसायिक शिल्प पनि स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ। व्यावसायिक डिजाइन गरिएको र निर्मित शिल्प खरिद गर्दा नियामक प्रतिबन्धहरू हटाउन मद्दत गर्दछ, जहाँ उनीहरूले आवेदन गर्छन्।
बिक्रीका लागि होभरक्राफ्ट - के सबै स्कर्ट समान छन्?
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #5 - के सबै स्कर्ट समान छन्? त्यहाँ तीन प्रकारको स्कर्टहरू सम्बन्धित छन्: थैला स्कर्ट, पर्खाल स्कर्ट, र फिंगर स्कर्ट। म हॉवरकम्प टाइप गर्छु सामान्यतया थकान स्कर्टहरू, प्रकार II पर्खाल स्कर्टहरू, र टाइप III ठूलो-स्तरीय पेशेवर होभरकम्पको रेसिंग वा मनोरञ्जनका लागि सामान्यतया औंठा स्कर्ट प्रयोग गर्दछ।
भित्री स्कर्ट र थैला स्कर्ट धेरै किट शिल्पमा पाइन्छ। फिंगर स्कर्ट धेरै मनोरञ्जन होभरकम्पानमा प्रयोग गरिन्छ। एक औंला स्कर्टमा साना साना खण्डहरू छन् जुन प्रत्येक व्यक्तिगत रूपमा उज्यालो पार्छ जुन जमीनको अनुरूप हुन्छ त्यसैले हॉवरक्राफ्टले सबै इलाकामा जान सक्छ। मनोरञ्जन औंला स्कर्ट सामान्यतया धेरै बलियो रबड सामग्रीबाट बनेको छ। औंलाहरु वास्तव मा पृथक "सानो स्कर्ट" को एक गुच्छा हो जो स्वतंत्र रूप देखि फैलन्छ। व्यापारिक शिल्पमा औंला वा खण्डित खण्डहरू छन्, (हानि सीमाको लागि) यदि क्षतिग्रस्त भएमा सम्पूर्ण स्कर्टको बदमाउनुको साटो, तपाइँले मात्र बिग्रिएको खण्डलाई बदल्नुहोस्।
कहिलेकाँही, होवरकम्प स्कर्टले तीव्र ढुङ्गाहरू तीव्र पत्थर आदिमा पार्न सक्दछ र छिट्टै तल खानु पर्दछ, त्यसैले तपाईलाई स्कर्ट प्रतिस्थापन गर्ने बारे जान्न आवश्यक छ, र काम कस्तो हुनेछ। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। तपाईले तपाईलाई सहयोग पुर्याउनुभएको छ? एक हॉर्नक्राफ्टलाई क्षतिग्रस्त एक टुक्रा स्कर्टको साथ प्रयास गर्नु भन्दा सजिलो सजिलो।
व्यावसायिक शिल्प प्रयोग चीर प्रतिरोधी सामग्री जस्तै Polyurethane / नायलॉन सामाग्री को उत्कृष्ट पहना, यूवी र नमक पानी संरक्षण को लागि। व्यावसायिक शिल्प परीक्षण गरीएको स्कर्टको 25% सम्मको साथ परीक्षणमा परीक्षण गरिएको छ। स्कर्टको सार्थक डिजाइनले पनि सामान्य स्तर ट्रिम प्रयोगमा अर्थ दिन्छ, वास्तवमा कुनै स्प्रे उत्पन्न गर्दछ र चालक र यात्रीहरू लगभग सुकेको रहन सक्छन्।
वाणिज्य शिल्पमा पनि IAPSS प्रणाली (एकीकृत एंटी प्लो स्कर्ट प्रणालीमा) हो भन्ने अर्थ छ कि सम्भावनात्मक घातक अवस्था सुरक्षा र राम्रो डिजाइनमा ध्यान दिएर रोक्न, हामी हाम्रो ग्राहकको सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिन्छौं। नहीं सबै स्कर्ट बराबर छ,
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - के सबै हौडरफ्रेन्डहरू छन्?
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #6 - के सबै होभरक्राफ्ट हल्ला हुन्? केहि निर्माताहरूले तपाईंलाई सबै होभरक्राफ्टलाई उच्च स्वरमा बताउन सक्छन्। सही छैन। के यो अर्थ हो कि तिनीहरू मोडेलहरू उच्च छन्, र तिनीहरू चाहँदैनन् कि तपाईं शान्त व्यक्तिहरूमा वरपर हेर्दै हुनुहुन्छ। हो, केहि होभरकम्पर्क (जस्तै रेसिअर्स) धेरै जोर हो, तर सावधान रहनुहोस् हालको सातामा बजारमा केहि सुन्दर चुप होभरक्राफ्ट हो। टाउकोको स्तरमा इन्जिनहरूसँग अत्यन्तै उच्च आवाजहरू हुनेछन् जुन तिनीहरू भित्र पसेको छन्। यो पनि सजग रहनुहोस् कि फ्यान डक्ट को साइज र आकार शोरको स्तरलाई असर गर्छ, ठूलो अक्षरहरु लाई सामान्यतया साना डक्टहरु भन्दा ठुलो हुन्छ। पत्ता लगाउनुहोस् कि यदि उच्च स्नोमोबाइल इन्जिन अझै पनि बनाइने छ भने नयाँ शान्त इन्जिनहरू। आवाज कम गर्न को लागी मफलरहरू, अन्य यन्त्रहरू, र डिजाइन सुविधाहरू प्रयोग गर्दछन्।
व्यापारिक शिल्पमा इन्जिनहरूले शोरलाई कम गर्न र नमक पानीको प्रतिरोध गर्दछ। यदि सम्भव छ भने ईन्जिनियरिङ् कम तल राखिएको छ जुन प्रशंसकलाई कुनै वायुप्रवाहको असर नगर्ने निश्चित छ; अधिक वायुप्रवाहको परिणामलाई उच्च दक्षतामा स्पष्ट पार्नुहोस्, यसले ईन्धन खपत र शून्यताको स्तरलाई असर गर्छ।
केही शिल्पले वायु सेन्से रसेन्सरहरू र निकास मफलरहरूलाई कम्तीमा शोर राख्नको लागि उपयुक्त बनाउँछ। एक इन्जिन वा दुई? धेरै होभरक्राफ्टले दुई इन्जिनहरू प्रयोग गर्दछ, एक बलका लागि, लिफ्टको लागि। लिफ्ट र जोडिको लागि केवल एक इन्जिन छ। यो नियन्त्रणको एक सेट प्रयोग गर्न सजिलो र टाढा छ सुरक्षित, एक इन्जिन सेवा गर्न सजिलो हुन्छ, साथै तपाइँ एक इन्जिनबाट कम शोर प्राप्त गर्दछ।
केहि वाणिज्य शिल्प गियरबक्स विधानसभा बिना डिजाइन गरिएको हो, यसले तिनीहरूलाई शिल्पमा धेरै कम इन्जिनलाई अनुमति दिन्छ, गुरुङको निम्न केन्द्र प्रदान गर्दछ। जी को कम सी धेरै नियंत्रण को धेरै आसानी प्रदान रोल को प्रवृत्ति को कम गर्दछ। यो पनि अर्थ हो कि इन्जिनहरू शोर घटाउन र नमक पानीको प्रतिरोध गर्न छोडिन्छ। व्यावसायिक डिजाइनरहरूले पनि फ्रिजमा कुनै एयरफ्लोको असक्षमता सुनिश्चित गर्न इन्जिन तल तल राख्छ; अधिक वायुप्रवाहको परिणामलाई उच्च दक्षतामा स्पष्ट पार्नुहोस्, यसले ईन्धन खपत र शून्यताको स्तरलाई असर गर्छ।
बिक्रीका लागि होभरक्राफ्ट - तपाईलाई कस्तो सुरक्षा सुविधा छ?
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #7 - मलाई कुन सुरक्षा सुविधा चाहिन्छ? रेसिङ होभरक्राफ्टले बचाव दलहरूसँग ठूलो संगठित कार्यक्रमहरूमा प्रयोगको उद्देश्य राख्दछ, र सुरक्षालाई चिन्ता छैन। उनीहरूलाई छिटो छिटो जान आवश्यक छ र सुरक्षा सुविधा जस्तै चीजहरूको लागि अतिरिक्त वजन टाँस्न सक्दैन। तर घर निर्माण निर्माण र मनोरञ्जन संस्करणहरू जुन भीडहरू र उद्धारकर्मीहरूबाट टाढा हुनेछन्, सुरक्षाको मूल तत्वहरू हुनुपर्दछ।
होवरक्राफ्टले "पिसिङ-इन" को ह्यान्डकcraftको धेरै सामान्य र निराशाजनक प्रवृत्तिलाई पानी वा भूमिमा नाक-डुबाइमा राख्नु पर्दछ (जसले चालक र शिल्पलाई अलग गर्न सक्छ); तिनीहरूले निश्चित रूपमा इन्जिन विफलताको स्थितिमा फ्लोट गर्नु पर्छ; र तिनीहरूले आगो र सुरक्षा परीक्षणको केही जिलहरुमा काम गर्न आवश्यक हुन सक्छ। साधारण-ज्ञान सुरक्षा विकल्पहरूमा इन्जिन-ह्याङ्ग कलाई पट्टियाँ, गैर पर्ची कोटिंग्स, प्रशंसक गार्डन, र यात्री ह्याङ्ग ह्यान्डलहरू समावेश छन्। जब पनि, जहाँ पनि सुरक्षित हुनेछ एक शिल्प छनौट गर्न निश्चित हुनुहोस्, र तथापि तपाई यसलाई प्रयोग गरेर योजना बनाउनुहुन्छ।
व्यापारिक शिल्पले सामान्य प्रयोग भन्दा बढीको लागि होभरकम्पको आवश्यकता छ र आधारभूत सुरक्षा भन्दा बढी अनुरोध गर्न अपील गर्दछ। वाणिज्यिक शिल्प सबै भन्दा तेज शिल्प नहुन सक्छ, तर यहाँ मिशन पूरा गर्न, कार्य परिमार्जन गर्न, सेवा नि: शुल्क घण्टामा राख्ने, सञ्चालनको सजिलो, स्थायित्व र सबै कार्यहरू सुरक्षित रूपमा कार्य गर्ने बारेमा हो।
राम्रो सुरक्षा डिजाइन कुनै दुर्घटना छैन; व्यापक विकास व्यावसायिक शिल्प डिजाइन गर्न गएको छ। सुरक्षाको डिजाइनको एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनुपर्छ, र डिजाइनरहरू अन्य शिल्पमा फेला परेन धेरै कारकहरू विचार गर्नु पर्छ। उदाहरणको लागि, फ्यान विधानको लागि अगाडि र पछिल्ला रक्षकहरू - जसले उनीहरूको दाहिने मनमा गर्दैनन्? (वास्तवमा, hovercraft को बहुमत छैन)। सबभन्दा ठुलो बिहान पनि सुरू गर्न को लागी भारी शुल्क सील ब्याटरहरुमा विचार गर्नुहोस्। केही शिल्पले एउटै डिब्बेमा बिजुली र ईन्धन राख्यो! केहि सरल खुला बिजुली कनेक्शन प्रयोग गर्दछ। कसैलाई कुनै पनि आधिकारिक सुरक्षा अनुमोदन बिना आफ्नै ईन्धन ट्यांक लगाईएको छ! ती शिल्पहरूको खोजी गर्नुहोस् जुन पूर्ण स्वतन्त्र सरकारी इन्जिनियरिङ, सुरक्षा र अपरेसन प्रमाणिकरण हुँदै आएको छ
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - तपाईं कसरी एक कर्ट्टिङ गर्ने काम गरिरहनुभएको छ कि?
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #8 - तपाईं कसरी नियन्त्रण गर्न कठिन छ कि शिल्प किन्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ? हॉवरक्राफ्ट स्टेरिंग एक विमान जस्तै उडान जस्तै छ। कुनै पाङ्ग्राहरू वा अन्य भागहरू भुइँमा बाँधेर बायाँ र दाँया घुमाईरहेका छन् वा उड्ने वायुफ्लोहरू रडारहरूसँग डाइरेक्ट गरेर। रोक्न अक्सर 180 डिग्रीको वरिपरि सम्पूर्ण शिफ्ट कताएर कताईरहेछ र जोशको सानो विस्फोट दिन सकिन्छ, जुन निकै रमाईलो छ र तिनीहरूलाई धेरै अनौठो बनाउँछ। तर विभिन्न मोडेलहरू फरक स्टीयरिंग विशेषताहरू छन्। ठूला रडवरहरूले थप हवाप्रवाहलाई सीधा दिन्छन्, सानो रडार भन्दा बढी प्रतिक्रिया दिन्छ। केही हॉवरक्राफ्टले जब टिप गर्नेछ, जुन सामान्यतया ईन्जिनियरिङ्को कारणले फ्यान मा उच्च तहमा माउन्ट गरिएको छ। तपाईं डंगलिंग तार र लेवर संग साइकिल ह्यान्डब्याक प्रयोग गरी केही डिजाइनहरू फेला पार्नुहुनेछ। अन्यले मोटरसाइकिलहरू र जेट-स्विसमा फेला पारेका जस्ता मोटो-गिद नियन्त्रणहरू प्रयोग गर्छन्। रेसिङ शिफ्टले तपाईंलाई घुमाउन पक्का गर्न आवश्यक छ, जबकि केहि मोडेलहरू विशेष रूपमा यो मुद्दा समाप्त गर्न डिजाइन गरिएको छ। सोध्नुहोस् कि उनीहरूको शिल्पले अन्य मोडेल भन्दा नियन्त्रण गर्न सजिलो बनाउँछ। यदि सम्भव भएमा एक परीक्षण ड्राइवको लागि धेरै लिनुहोस्।
व्यावसायिक उपयोगको उपयोग। पानीमा - शिल्प तपाईं प्रयोग गर्न चाहने अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सक्दछ? पानीमा, छेउमा बस्न, मा चढेर, बाहिर चढेर, यो माथि उठाउने? के यो पक्का छ? के यो फ्लोट हुनेछ? पानीको सुरुवातमा कत्तिको वजन उठाउन सक्छ? के कुनै सुरक्षा सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ? आपातकालीन रोक्नुहोस्; के तपाईं नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ? के शिल्प सिधा लाइनमा यात्रा गर्दछ? शिल्पले मात्र औंलापन नियन्त्रण चाहिन्छ। कर्नर गर्दा तपाईले आफ्नो वजन फेंक गर्नु हुन्छ? धेरै शिल्पहरू जबर्जस्तीको छेउमा नआउन्जेल सम्म पुग्दैनन्? ह्यान्डब्याण्ड र थ्रोटलेसँग प्रयोग गर्न को लागी सहज ड्राइभिङ चलाइरहेको छ? धेरै शिल्पले जटिल जोस्स्टिक्स र एलेवेटर नियन्त्रणहरू र / वा उल्टाउने तवरमा समावेश गर्दछ जसले मजाक तत्वलाई लिन्छ र सुरक्षित सञ्चालन गर्दछ।
डिजाइनर सिफ्टको प्रयोग गर्न सम्भव छ जुन सम्भव छ। निर्माताको डिजाइन, अपरेशन, महसुस र जवाफदेहीलाई विशेष ध्यान दिँदै यी अतिरिक्त नियन्त्रणहरू आवश्यक पर्दैन। व्यापारिक शिल्प को गतिशीलता को संदर्भ मा लंबी सुन्दर मोहन को लागी गर्न को लागी प्रयोग गरिन सक्छ या कडा मुंह मा सीमित जलविद्युत या मार्नास बनाउन को लागी। सन्तुलन र शिल्पको सेटअपले तपाईलाई यो भूमि र पानी दुवै स्थानमा बदल्न सक्नुहुन्छ। एक प्रदर्शनीमा तपाइँ सामान्यतया भन्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं 15 मिनेट भित्र महसूस र नियन्त्रण मनपर्छ।
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - नयाँ भागहरु संग सबै हौडरफर्म छ?
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #9 - सबै हॉवरक्राफ्टले नयाँ भागहरूसँग बनाएको छ? म यकीन छैन कि यदि यो अन्य उद्योगहरुमा हुन्छ वा छैन, तर केहि होवरक्राफ्ट निर्माताहरु लाई वास्तव मा आफ्नो "नयाँ" होवरक्राफ्ट मा refurbished इन्जिन डाल दिए। यो धेरै बारेमा कुरा गर्दैन, तर सत्य थाहा हुनु पर्छ। म एक ब्रान्ड नयाँ स्नोमोबाइल किनेको छु भनेँ र निर्माताले गोपनीय रूपमा बायाँ-ओभर वा बिक्रि भागेका भागहरू बेचेको छ। मैले होभरक्राफ्टलाई फर्केर फर्केर हेरेको छु, पुन: हटाइएको छ, र नयाँ रूपमा पुनःकोषमा। कारहरू जस्तै, ओडोमिटरहरू प्रतिस्थापित वा चिनारी मेटिनेहरू द्वारा रिसेट गर्न सकिन्छ।
केही निर्माताहरूले नयाँ हॉवरकम्पले दोस्रो-हात इन्जिनको साथ, स्थानीय जलाशय यार्डबाट खरिद गरेका छन्। या नाक खुवाउन पानीमा र अचानक रोक्न, ह्यान्डब्यान्डमा यात्रु फेंक। शिल्पमा पर्याप्त बहाव समावेश छैन र सिङ्क! शिफ्ट जो पानीमा पुन: सुरुवात गर्दैन वा ढलानहरूमा जाने छैन, एक टुक्रा बैग स्कर्ट जसले मेगाबक्सको मरम्मत गर्न लागत दिन्छ। हल्लाहरू र पानीमा घुमाउनुहुन्छ, शिल्प तपाईं आफ्नो वजनलाई उल्लङ्घन गर्दै कोने मा फेंकने बिना बिरुद्ध नहुन सक्नुहुन्न! क्राफ्टले आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरू जस्तै जस्तै रक्षकहरू हराइरहेको छ। हामीले निर्मातालाई भेट्ट्यौं कि एउटै डिब्बेमा फिट घरको ईंधन र विद्युत् उपकरण फिट छ, शौकिया बिल्डर्सहरूले प्राय: आधारभूत सुरक्षा सामान्य अर्थलाई बेवास्ता गर्दछ।
सौभाग्य देखि यो एक ठूलो समस्या होइन, र यहाँ कुनै पनि विशिष्ट कम्पनीको नाम को आवश्यकता छैन। मलाई थाहा छैन यदि तपाईले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा 100% पक्का भएको कुनै पनि तरिका हो, तर यदि तपाई सबैलाई ठीक छ भने सबै भन्दा राम्रो सोध्न चाहानुहुन्छ भने ब्रान्ड नयाँ घटकहरू समावेश गर्दछ। र निश्चित गर्नुहोस् कि सामान्य स्पेयर पार्ट्स सजिलै उपलब्ध छन् र परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ।
वाणिज्यिक शिल्पले पूर्ण निर्माताको वारेन्टीको साथ अत्यधिक भरोसेमंद नयाँ इन्जिनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, धेरै वर्षले बर्फमोबाइल र माइक्रो्रोइट उद्योगहरूमा प्रयोग गर्दछ। यी इन्जिनहरू हजारौं घण्टाको लागि निकै कठोर समुद्री परिस्थितिमा र अष्ट्रेलिया र मध्य पूर्व जस्ता मौसमहरूमा आफ्नो स्थानमा राखिएको छ। वाणिज्य संशोधित इन्जिनहरू प्रयोग गर्दैनन् जुन उच्च शक्तिकालमा चलाउन वा निर्माताहरु भन्दा माथि RPM को लागि बनाईएको गति वा शक्तिको सिफारिश गरिन्छ। यो सरल कारण हो, इन्जिन निर्माताले अधिकतम सुरक्षित पावर र आरपीएममा इन्जिन पूर्ण रूपमा परीक्षण गरेको छ र यो मापदण्ड भन्दा बढि चलिरहेको भागहरूमा असफलता वा गैर-योग्यता योग्य सेवा सेवा कम सेवा जीवनमा अत्यधिक तनाव हुनेछ।
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - के मैले हजुरआमाले जितेको छु?
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #10 - मैले कस्तो आकार हॉवरक्राफ्ट प्राप्त गर्नुपर्छ? तपाईंको मनोरञ्जन होभरकम्परीको आकार चयन गर्दा सावधान रहनुहोस्। तपाईं सजिलै संग पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईले यसको प्रयोग गरेर यो कत्तिको ठूलो हुनुपर्छ। एक दौड शिल्प मात्र सीट एक व्यक्तिको आवश्यकता छ, तर क्रुज गर्ने वा माछा गर्नका निम्ति तपाईले चाहानुहुन्छ कि3वा4व्यक्तिहरू सीट गर्नुहुनेछ। र तपाईंको साधारणतया कुनै पनि मोडेलमा कितने व्यक्ति उपयुक्त हुनेछ भनेर निर्धारण गर्न तपाईंको सामान्य अर्थ प्रयोग गर्नुहोस्। केही शिल्प सीट4व्यक्तिहरूलाई भनिएको छ जुन स्पष्ट रुपमा केवल सीट2वा3हुन सक्छ।
अहिले एक व्यावसायिक कर्तव्य शिल्प हो जुन9व्यक्तिहरूलाई सीट गर्न सक्छ वा यसमा 1500lbs (680kgs) को प्वाइलोड हुन सक्छ। यद्यपि निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले भूमि र पानी दुवैमा परी परीक्षण र सिद्ध सुरक्षित क्षमताहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ, जुन भिन्न हुनेछ। डुङ्गाहरू जस्तै, सबै मोडेलहरूमा अनुमतियोग्य यात्री क्षमता प्लेट वा लेबल हुनुपर्छ। के तपाईँ साथीहरू र गियर क्याम्पिङ वा भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ? या यो एक रेसिंग खिलौना तिम्रो लागि बस छ? के तपाईंलाई उत्पादकता बढ्छ वा एक उच्च क्षमता छ ट्रक आकार शिल्प को आवश्यकता छ? त्यहाँ सबै आकारका मोडेलहरू छन्, त्यसैले तपाईंको लागि सही छान्नुहोस्।
यकीन गर्नुहोस् कि ठूला शिल्प जो दुवै परिवेश र सबै इलाका अधिक शक्तिशाली छ किनकी यसले आफैले अधिक व्यापारिक अवसरहरू, ठूला कार्यहरू र बढि मानिसहरु र उत्पादन एक स्थानबाट अर्कोमा लैजान्छ। यसको अर्थ साइटमा ठूलो चालक दल, वा बोर्डमा र उपकरण वा यन्त्रहरू लिने क्षमता, मोबाइल काम साइट, प्रयोगशाला, उद्धार वाहन, ट्राभल वाहन, टूर वाट वा नौकाको रूपमा उपयोगी बनाउन धेरै मानिसहरू सँगै काम गरिरहेका छन्।
नोट: केहि आपूर्तिकर्ताहरू प्वाइलोड मूल्याङ्कनहरूको बारेमा सस्तो आर्थिक हो भने, यदि तपाईं पानीको नजिक जान चाहानुहुन्छ भने सबै होभरकम्पले दाउन्डको रूपमा चिनिने दबाब दिन्छ, र सामान्यतया 50% कम वजन लिन्छ जब पानीमा सुरू हुन्छ (तुलनामा) भूमि)। Hovercraft आपूर्तिकर्ता कहिल्यै नसोध्नुहोस् - कितने सीटहरू? तपाईले घर प्राप्त गर्न सक्नु पक्का, सँधै पानी-पानी प्वाइललोड क्षमता जाँच गर्नुहोस्। यात्रीहरू र चालक, अतिरिक्त उपकरणको वजन जाँच गर्नुहोस्।
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - सबै पनि होशियार छन्!
बिक्रीको लागि होभरक्राफ्ट - क्रेताको मार्गदर्शक प्रश्न #11 - के सबै होभरक्राफ्ट एकै हो? यो एक अझै पनि सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो जुन मान्छे हो जब एक होवरकफ्ट खरीद गर्दा। मानिस प्रायः उत्साहित हुन्छन् जब उनी हॉभरकम्पिक संसारमा खोज्छन् र पहिलो वा सस्ता भन्दा पहिला प्रयोग गर्दछन् (र प्रायः प्रयोग गरिएको) मोडेल त्यहाँ तिनीहरूले देख्न पाउँदैनन्, त्यहाँ साकार नहुने धेरै कम्पनीहरू, धेरै मोडेलहरू, थुप्रै मुद्दाहरू, र सोध्न धेरै प्रश्नहरू छन्। हॉवरक्राफ्ट निर्माणमा नियमहरूको गम्भीर कमी छ, त्यसैले तपाईंले आफ्नै अनुसन्धान गर्नु पर्छ।
राम्रो सुरक्षा डिजाइन कुनै दुर्घटना छैन; व्यापक विकास डिजाइनको लागी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जब डिजाइनमा जान पर्छ, किनकि होभरकम्पले वजन निर्भर वाहनहरू छन्, डिजाइनरहरू सामान्यतया स्थायित्व र प्रदर्शनबीचको सन्तुलन हुनुपर्छ।
होभरक्राफ्ट वजन निर्भर छ, र अधिक आपूर्तिकर्ताहरूले पतली ग्लास फाइबर होभरक्राफ्ट प्रयोग गर्छन्। पातलो गिलास फाइबर हल्सहरू केवल सबै भू-भाग प्रयोगको लागि पर्याप्त टिकाऊ होइन। केही शिल्पले प्रवाहयोग्य हल्लाहरू प्रयोग गर्दछ जुन उकालोको लागि धेरै प्रवद्र्धन हुन्छ यदि तपाई जहाँ पनि कुनै नमिले मैदान, बर्फ, मलबे, पानीको पानीमा वा बाहिरिदाहरू, चट्टानहरू, नराम्रो मैदान नजिकको शिल्प प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ। तथापि सिद्ध सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर कार्बन फाइबर / किभलर वा एचडीपीई निर्माताहरूले इन्जिनियरिङ घटक गुणस्तर वा अशक्त शक्तिसँग सम्झौता नगरी एक शिल्प सिर्जना गर्न सक्छन्।
आशा छ कि तपाईं अब केहि समस्याहरू बुझ्नुहुन्छ, र थाहा पाउनु विकल्पहरू विचार गर्न र कुन प्रश्नहरू सोध्छन् जब तपाईंको आफ्नै होभरकफ्ट खरिद गर्दछ। कुनै पनि कुरा सुन्नुहोस् जुन तपाईं सबै होभरक्राफ्टलाई उच्च स्वरमा राख्नुहुन्छ वा तिनीहरू सबै "प्लाउ-इन" हुनुहुन्छ, किनभने यो सहि साँचो होइन। विशेष गरी प्रयोग गरिएको होभरक्राफ्टको सावधान हुनुहोस् जब सम्म तपाई मेक्सिकन र / वा फाइबर ग्लास मरम्मत विशेषज्ञ हुनुहुन्न। सस्तो केहि लाग्न नसक्ने जुन तपाईं भाग्य खर्च गर्दछन्, वा तपाईले ती सबैलाई अभिशाप गर्नुहुनेछ! सही प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र बुद्धिमान जवाफहरूमा जोड दिनुहोस्। सबै हॉवरक्राफ्ट निश्चित रूपमा त्यहि होइन, यो भन्दा टाढा।